काठमाडौं। गर्भावस्था आफैंमा एउटा जटिल अनि विशेष अवस्था हो । यस्तो अवस्थामा आमा बन्ने खुसी मात्र जोडिएको हुँदैन, गर्भसँग सामाजिक, पारिवारिक तथा आत्मीय सम्बन्ध पनि हुन्छ । गर्भावस्था महिलाहरूको नारी र नारीत्व झल्काउने जीवनको एउटा महत्वपूर्ण अवस्था हो ।
दाम्पत्य जीवनको सफलता अनि नयाँ अनुभवसँगै शारीरिक, मानसिक अनि भावनात्मक परिवर्तनका साथ सबै जिम्मेवारी एकसाथ आउने भएकाले पनि होला, गर्भवती महिलाहरूमा अनेकौं जिज्ञासा पाइन्छ । यस क्रममा अब बललिँदो मौसम तथा समयसँगै थपिएको चिसोमा के गर्ने ? गर्भस्थ शिशुलाइ गाह्रो पो हुन्छ कि ? भन्ने जस्ता जिज्ञासा हुनु स्वाभाविक हो।
जाडो हुनेबित्तिकै वा वातावरणीय तापक्रम कम हुँदैमा आत्तिनु हुँदैन, तर मौसमसँगै आफूलाई स्वस्थ राख्न केही सावधानी अपनाउनैपर्छ । चिसो मौसममा पनि हाम्रो शरीरको तापक्रम स्थिर रहनुपर्छ।
चिसोमा आफूलाई तातो बनाउन सबैभन्दा पहिले पहिरनमा ध्यान दिनुपर्छ। मौसमअनुसार बाक्लो तथा तातो पहिरन लगाउनुपर्छ । शरीरलाई पूर्णरूपले ढाक्ने तर खुकुलो पहिरन रोज्नु उपयुक्त हुन्छ । गला ९घाँटी० छोप्नु तथा मास्क लगाउनु उत्तिकै आवश्यक छ । खुट्टा छोप्न जुत्ता लगाउन सकिन्छ । पहिरनले चिसोका साथै मौसम परिवर्तनले सताउने रुघाखोकी तथा भाइरल संक्रमणहरूबाट पनि जोगाउँछ। विदेशतिर गर्भवतीहरूले रुघाखोकी तथा भाइरल संक्रमणविरुद्ध भ्याक्सिन लगाउने चलन पनि छ । यो मौसममा गर्भवती महिलाहरू धेरै बाहिर बस्नुभन्दा पनि न्यानो तर नगुम्सिने कोठामा बस्नु उपयुक्त हुन्छ।
जाडो मौसममा पानी भन्नेबित्तिकै सातो जान्छ, यतिबेला पानी छुने, नुहाउने अनि पिउने काममा कमी आउनु स्वाभाविक हो, तर यस्तो अवस्थामा चिसोका साथसाथै अन्य रोगहरूबाट पनि जोगिनुपर्छ । गर्भावस्थामा पाठेघर ठूलो हुन्छ, यसले पिसाब नली ९युरेथ्रा० लाई थिच्छ, साथै युरिनस्टासिस पनि हुनसक्छ । त्यसैले गर्भावस्थामा युटिआई हुने सम्भावना बढी हुन्छ । यस्तो स्थितिमा पानी तथा झोल कुरा बढी सेवन गर्नुपर्छ । चिसो पानी पिउन गाह्रो भए मनतातो पानी पिउन सकिन्छ । यसका साथै कागतीपानी, महपानी तथा सुप पनि खान सकिन्छ ।
त्यस्तै पानी चिसो छ भन्दैमा सरसफाइमा कमी गर्न मिल्दैन । हुन त संक्रमणबाट जहिले पनि जोगिनुपर्ने हुन्छ । यद्यपि गर्भावस्थामा अझ बढी ध्यान पु¥याउनुपर्छ । त्यसैले राम्रोसँग हात धुने, सफा र सुकिलो पहिरन लगाउने, शारीरिक सरसफाइ, भित्री अङ्गहरूको सफाइका साथ वातावरणीय सफाइमा पनि ध्यान र्पुयाउनुपर्छ । चिसो मौसम अनि चिसो पानी भनेर यस्ता कुरामा बेवास्ता गर्नुहँुदैन । खानेकुराहरू पनि सफा गरेर मात्र सेवन गर्नुपर्छ ।
धेरै गर्भवती महिलाहरू चिकित्सकसँग परामर्श गर्न नरुचाउने तथा कतिले त परामर्शपछि चिकित्सकले लेखेको औषधि पनि सेवन नगरेको पाइन्छ । गर्भावस्थामा आफूखुसी औषधि सेवन गर्नु गलत हो तर चिकित्सकको परामर्शको पालना वा चिकित्सकले प्रेस्क्राइब गरेको औषधि सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ । समयमै आवश्यक औषधि प्रयोग नगर्दा रोग बढ्नुका साथै जटिलता थपिन सक्छ । गर्भवतीहरूले जाडो मौसम आयो भनेर आत्तिनु हुँदैन बरू मौसमअनुसार सावधान हुनु जरूरी छ ।
Tagsडा. बालकृष्ण साह